Tanzania: 35 Arday Iyo Macalimiintoodii Oo Shil Gaadhi Ku Dhintay - Wargane News
Home Somali News Tanzania: 35 Arday Iyo Macalimiintoodii Oo Shil Gaadhi Ku Dhintay
Sodon iyo shan arday ah iyo labadoodii macallin kuwaas oo waqooyiga waddanka Tanzania Sabtidii ugu geeriyooday shil baabuur oo argagax leh ayaa la aasayaa maanta.
Ardaydan iyo macallimiintooda ayaa waxa ay u socdeen iskuul ay daris yihiin si ay uga qeybqaataan imtixaan tijaabo ah.
Waxa ay aheyd dabayaaqada todobaad murugo badan, xilli qoysaska, asxaabta iyo kaniisadaha ay habeenkii oo dhan ay u soojeedeen geerida subaxii Sabtida ku timid 35 carruur ah, kuwaas oo ku dhintay mid ka mid shilkii ugu xumaa ee ka dhaca dalka.
Saaka kumannaan dad ah oo baroordiiqaya, oo ay hogaaminayso madaxweyne kuxigeenka Saamiya Suluhu ayaa isugu imanaya duco ka dhici doonta garoonka kubadda cagta ee Sheekh Amri Abeid ee ku yaal magaalada waqooyiga Tanzania ee Arusha.
Ardayda iskuulka hoose dhexe ee Lucky Vincent, ayaa da’doodu waxa ay u dhaxaysay 12-14 sanadood waxa ayna ku safrayeen bas ay ku tegi lahaayeen iskuul ay daris yihiin si ay uga qeybqaataan imtixaan tijaabo ah kahor inta aanay dabayaaqada sanadka u fariisan imtixaanaadka looga gudbo dugsiga hoose dhexe.
Saddex arday oo ka badbaaday shilka ayaa weli waxa ay ku jiraan isbitaalka iyadoo qaarkoodna ay ku yaalaan dhawaacyo culus.
Dhanka kale waxaa soconaya baaritaano lagu ogaanayo waxa keenay shilkan, dadka reer Tanzania-na waxa ay ugu baaqeen dowladda inay si degdeg ah wax uga qabato xaaladda aan wanaagsaneyn ee waddooyinka dalka iyo inay dhaqangeliso shuruucda nabadgelyada waddooyinka.
Somalia: “Kenya Should Not Build Wall” Somali President
Somalia: Oday Dhaqameed Ka Soo Jeeda Muqdisho Ku Baaqay In La Sii Daayo Dhalinyaro Hargeysa Ku Xidhan